5 युरोपमा सर्वश्रेष्ठ पिकनिक स्पट | एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्
घर > यात्रा युरोप >5युरोपमा सर्वश्रेष्ठ पिकनिक स्पट
चाहे तपाई साताको अन्त्यका लागि यात्रा गर्दै हुनुहुन्छ वा युरोपमा लामो छुट्टीको लागि, तपाइँ सँधै आराम गर्न समय बनाउनु पर्छ. पिकनिक भनेको आइकिकनिक साइटहरू र दृश्यहरूको आराम र प्रशंसा गर्नको लागि एक अद्भुत तरिका हो. त्यसैले, तपाईंलाई आफ्नो यूरोपीयन छुट्टीमा सुरू गर्न मद्दतको लागि, हामीले युरोपमा सब भन्दा राम्रो पिकनिक स्पटको पिकनिक टोकरीलाई हातले उठाएका छौं र प्याक गरेका छौं. बस फिर्ता बस, र दृश्य मजा लिनुहोस्!
रेल परिवहन यात्रा गर्न सबैभन्दा वातावरण मैत्री तरिका हो. यस लेखमा ट्रेन यात्रा बारे शिक्षित गर्न लेखिएको थियो र द्वारा गरिएको थियो एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्, सस्ता ट्रेन टिकट वेबसाइट विश्व मा.
1. पेट्रिन हिलमा पिकनिक, प्राग
पेट्रिन हिल पार्क मा दृश्य र वातावरण को लागी एक को लागी बनाउँछ5यूरोप मा सबै भन्दा राम्रो पिकनिक स्पट. विडंबना, लेसर टाउनमा अवस्थित, पेट्रिन हिल एक हरियो र आकर्षक पार्क हो कि प्राग महल लाई नदेखी. पेट्रिनले राजधानीको सबैभन्दा सुन्दर दृश्य प्रस्ताव गर्दछ, र तपाईं वेधशाला टावरमा चढ्न सक्नुहुनेछ साँच्चै दृश्य दृश्य शहर को, महल, र पुलहरू.
पेट्रिन हिल वसन्तमा युरोपमा पिकनिकको लागि उत्तम छ, गिरावट वा गर्मी. पात देखिनेछ गिरावट मा आश्चर्यजनक र वसन्त र ग्रीष्म allतुमा सबै रूखहरू र भूमि फूलहरू फूलेर हरियो रंगमा हुनेछन्. बस आफैले बेरीको साथ केही स्कोनहरू समात्नुहोस् आर्टिक बेकहाउस र तपाइँ सबै प्रागमा एक अद्भुत पिकनिकको लागि सेट हुनुहुन्छ.
पेट्रिन हिलमा कसरी पुग्ने?
पेट्रिन हिल पुरानो शहर र शहर बीचमा मात्र छ. तपाईं फ्युनिकुलर बाट यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, ट्राम वा बस, सबै पर्यटकहरु जस्तै. तर, तपाईं पैदलबाट पेट्रिन हिलमा जान सक्नुहुन्छ, चार्ल्स पुल माला स्ट्राना र लेनन भित्तामा क्रस गर्नुहोस्. यसले तपाईंलाई एक घण्टा लिन सक्दछ यदि मौसम राम्रो छ र सूर्यास्तको लागि पिकनिक शहरको यो काल्पनिक दिनको लागि एक महान अन्त्य हुनेछ।.
2. सक्सन स्विजरल्याण्डमा नदी द्वारा पिकनिक, जर्मनी
भव्य नदीहरू, अगाडि हिउँ चुचुरो, र तपाईका चारैतिर हरियो घासका मैदानहरू, सक्सन स्विट्जरल्याण्ड राष्ट्रिय पार्क एक शानदार स्वर्ग हो. अल्छी बिहान वा अन्तमा एक लामो वृद्धि, बास्टेई पुल एक अद्भुत पिकनिकको लागि आदर्श स्थान हो.
यदि तपाईं साहसिक र एक पैदल यात्रा उत्साही हुनुहुन्छ, तपाइँ पिकनिकको लागि ब्रेक लिन निश्चित रूपले प्रशंसा गर्नुहुनेछ. अर्कोतर्फ, यदि तपाईं सुन्दर बस्ने र आराम रुचाउनुहुन्छ भने, सेक्सन स्विट्जरल्याण्डमा नदीको किनारमा पिकनिक तपाइँको सबै यूरोपीयन छुट्टिमा शीर्ष हुनेछ.
स्याक्सन स्विट्जरल्याण्ड कसरी पुग्ने?
सेक्सन स्विट्जरल्याण्ड मात्र हो 30 मिनेटहरू ड्रेस्डेनबाट रेल यात्रा. त्यसैले, एउटा एयर्सचेक प्याक गर्नुहोस्, कफी, जामुन, र स्थानीय बजारबाट फल र तपाईं सबै युरोपको सब भन्दा सुन्दर पिकनिक स्पटमा एक महान समयको लागि सेट हुनुहुन्छ.
डुसेल्डोर्फ ट्रेन बाट म्यूनिख
ट्रेनबाट म्युनिकमा ड्रेस्डेन
न्युरेनबर्ग म्यूनिखबाट ट्रेन द्वारा
ट्रेनबाट म्युनिकमा बोन
3. लगो डि ब्राइजमा तालमा पिकनिक, इटाली
तालमा नीलो प्रिस्टाइन पानी र हिमाली शिखरहरू झल्किन्छ, the views of Lake di Braies in South Tyrol in Italy will color your picnic with beautiful memories. इटाली पाक स्वर्ग हो, संग संयुक्त शानदार तालहरू र पहाड, धेरै कारणहरूले यो ताल हाम्रो माथिको हो भनेर विस्तृत रूपमा वर्णन गर्न अनावश्यक छ5युरोप मा सबै भन्दा राम्रो पिकनिक स्थान.
यदि तपाईं डोलोमाइट्समा पैदल यात्रा गर्न उत्सुक हुनुहुन्छ, सर्किट लागो डि ब्रेई डे-हाइक एकदम सजिलो छ. त्यसैले, तपाईं प्रकृतिमा एक अद्भुत दिन समाप्त, तपाईंको पाणिनी वा पिज्जाबाट टोक्दै र डोलोमाइट्समा सबैभन्दा ठूलो प्राकृतिक तालको दृश्यहरूको प्रशंसा गर्दै.
मलाई लगो डि ब्राइमा कसरी पुग्ने?
लगो डि ब्रेइज बोल्जानोबाट टाढाको यात्रा हो, नजिकको शहर. रेलबाट लगभग एक घण्टा लाग्छ, वा तपाईं नजिकैको अद्भुत आवास पाउन सक्नुहुन्छ.
ट्रेन बाट मिलान भेनिस
पादुआदेखि भेनिस ट्रेन द्वारा
बोलोग्ना बाट भेनिस ट्रेन द्वारा
रोम बाट भेनिस ट्रेन द्वारा
4. मार्गरेट टापुमा एउटा टापुमा पिकनिक, बुडापेस्ट
डान्यूब नदीमा अवस्थित, बुडा र कीट बीच, मार्गरेट टापु बुडापेस्टमा वसन्त पिकनिकको लागि उत्तम छ. टापु हो 2.5 मी, घाममा बाहिरी रमाइलोको लागि स्थानीयहरू माझ मनपर्ने. साथै, त्यहाँ नजिकैको एक स्थानीय बजार छ, त्यसो भए शहरबाट तपाईंको पिकनिक व्यवहारहरू गर्न आवश्यक छैन सार्वजनिक यातायात द्वारा. तपाईं बस आफ्नो सबै मनपर्नेहरू र बजारमा केहि स्थानीय व्यञ्जनहरू लिनुहोस् र टापुतिर लाग्नुहुनेछ.
मार्गरेट टापुमा जापानी बगैचा पनि छ जुन तपाईंको अद्भुत पिकनिकको अघि वा पछिको भ्रमणको लागि पूर्ण रूपमा लायक छ.
म मार्गरेट टापुमा कसरी पुग्छु?
ट्राम वा बस द्वारा, मार्गरेट टापु सार्वजनिक यातायात द्वारा धेरै पहुँचयोग्य छ. आन्तरिक टिप: बुडापेस्ट कार्डले तपाईंलाई सार्वजनिक यातायातका लागि विशेष अतिरिक्त दिन्छ र आकर्षण.
5. चैम्प्स डे मार्स पेरिसमा पिकनिक
पेरिससँग असंख्य छ सुन्दर बगैंचा र Seine साथ पिकनिक स्पट. पेरिसमा सर्वश्रेष्ठ पिकनिक स्थान आइकोनिक चैम्प्स डे मार्स स्थानको पार छ.
यो सातौं एरन्डिसीसेमेन्ट र एफिल टावरको बिच एक भव्य हरियो स्थान हो. यो पेरिसमा पिकनिकका लागि उत्तम छ र सूर्यास्तको लागि सबै भन्दा राम्रो सिटहरू प्रदान गर्दछ. परिदृश्य बाहेक, यो पनि एक हो 10 पेरिसको एफिल टावरमा उत्तम दृश्यहरू.
प्रत्येक ग्रीष्म Parisतुमा पेरिस परिवारहरू घाम माग्छन् वा बगैंचाको गिरावटको दृश्यको आनन्द लिन्छन्. यो धेरै शांत छ र एफिल टावर राती बत्तीहरू हेर्नको लागि एक अद्भुत सेटिंग प्रदान गर्दछ.
त्यसैले, एक ताजा बॅगेट प्याक गर्न निश्चित गर्नुहोस्, क्यामबर्ट, ताजा फल, रक्सी, र युरोप मा एक उत्तम पिकनिक स्थान को लागी.
चैम्प्स डि मार्स गार्डनहरूमा कसरी पुग्ने?
तपाईं मेट्रो वा RER ट्रेन लिन सक्नुहुनेछ. केवल चैम्प डी मार्स-टूर एफिल स्टेशन मा उतर्नुहोस्.
यात्रा भारी र थकाइलाग्दो हुन सक्छ किनकि हामी जहिले पनि देख्न र सबै कुराको अनुभव गर्न चाहान्छौं. युरोपमा यति धेरै उल्लेखनीय र अविस्मरणीय गतिविधिहरू र प्रस्तावहरू छन्. जबकि तपाई जहिले पनि सकेसम्म हेर्नको लागि प्रयास गर्नुपर्दछ, कहिलेकाँही तपाईले यसलाई सजिलो लिनु पर्छ. स्थानीय व्यंजनहरु संग पिकनिक हुनु देश र पाक कला अन्वेषण गर्न को लागी एक शानदार तरीका हो, एक कदम नबनाई.
एम्स्टर्डम ट्रेन द्वारा पेरिस
ट्रेन द्वारा लन्डन पेरिस
ट्रेन द्वारा रोटरडम पेरिस
ब्रसेल्स ट्रेन द्वारा पेरिस
यहाँ मा एक ट्रेन बचत गर्नुहोस्, हाम्रो सूचीमा कुनै पनि सुन्दर पिकनिक स्पटमा तपाईंलाई सस्तो ट्रेन टिकटहरू फेला पार्न मद्दत गर्न हामी खुशी हुनेछौं.
के तपाइँ हाम्रो ब्ल्ग पोष्ट ईम्बेड गर्न चाहानुहुन्छ "युरोपमा Best बेस्ट पिकनिक स्पट" तपाईको साइटमा? तपाईं या त लिन हाम्रो फोटो र पाठ र हामीलाई क्रेडिट लिंक संग यो ब्लग पोस्ट. वा यहाँ क्लिक गर्नुहोस्: https://iframely.com/e એમ્બેડ/https://www.saveatrain.com/blog/best-picnic-spots-europe/?lang=ne اور– (को एम्बेड कोड हेर्न एक सानो तल स्क्रोल)
बनभोज	पिकनिकयुरोप	पिकनिकिन पेरिस	पिकनिक स्पटस्युरोप	पिकनिक योग्य	ग्रीष्मकाल	ट्राभल प्याराग	यातायात स्विट्जरल्याण्ड